Ọtụtụ azụmaahịa azụmaahịa (B2B) usoro ahịa dị ogologo ma sie ike. Ọ bụ nguzozi nke itinye uche n’uche rue mgbe ị ga-eme mkpebi nzụta ma ghara ịgbo ha ma chụpụ ha. M na-ele ụfọdụ folks azụlite na-eduga incredibly ọma, na m na-etinye “Adịghị Azịza” na m ekwentị akwụkwọ zere ahịa ndị na-adịghị.
Tickle & Woo nwere ụzọ dị iche. Họrọ site na ọtụtụ ọdịmma onwe gị na naanị 'denye aha' na ọrụ Tickle & Woo. Ha ga-eziga a Igbe Akara na olile anya gị kwa ọnwa na ihe dị mma na ya nke ha ga-anụ ụtọ. Edere na ngwugwu ahụ bụ akara ngosi gị na ozi kọntaktị gị - na-enye ohere kwa ọnwa maka atụmanya ahụ iji mee ka uche gị dịrị.